Tayada Waxbarashada Puntland
30 Dec 30, 2012 - 11:41:37 AM
Wasaarada Waxbarashada Puntland ayaa ka warbixisey qorshayaasha u
ga degsan horumarinta iskuulaadka iyo kor u qaadida Tayada Ardyeda Puntland.
Wasiir ku xigeenka Waxbarashada Puntland Jaamac Yaasiin Jaamac oo maanta 30 December,2012 kula hadlay Saxaafada magaalada Bossaso ayaa ka waramay safar dhowaahan uu ku joogey magaalada oo daba socdey kormeerka tayada waxbarashada Puntland dabagalkeda.
Waxqabadka Wasaarada afartii sanno ee la soo dhaafay ayuu wax ka taabtay wasiirku oo uu sheegey in horey loo jaray wado aad u dheer islamarkaasina mustaqbalka dhow higsan doonaan qorshihii loo socdey.
Shaqada baaxada leh ee la qabtey ayuu xusey wasiirku in dhamaan madaxda iyo hawlwadenada kala duwan ee wasaarada waxbarashadu ka qayb qaateen iyagoo isku duuban kuna dhiirigeliyey inay sii wadaan dadaalka.
Wasaarada Waxbarashada Puntland oo hormuud ka yahay Dr,Cabdi Faarax Juxa ayaa lagu tilmaamaa waaxaha ugu shaqada badan Dowladda Puntland ,waxana ay ku howlanyihiin sidii ay deeqo waxbarasho ugu heli lahaayeen ardeyd ka baxda Iskuulada sare ee Puntland.
Halkan ka dhageyso Shir saxaafadeedka Wasiir ku xigeenka Waxbarashada More Articles
B.Fanka Ciida & Radio Garowe
Garowe sidee maanta loga ciiday?
Gaas''Way naga go'an tahay in la hirgaliyo dimoqraadiyad ''